ယူထားတဲ့ထိုင်ခုံကနေအခန်းအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရိုးရှင်းစွာအဲဒီမှာအခန်းနှင့်အခန်း4လူကိုပိတ်နှင့်ယူထားတဲ့ထိုင်ခုံ naobrot အတွက်အရာအားလုံးပွင့် ..
အများကြီးထက်ကွဲပြားခြားနားသော။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်ကယူထားတဲ့ထိုင်ခုံယစ်မူး debiloidov တစည်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် ... ဒါဟာ overpay သာ. ကောင်း၏ ... ကွာလွယ်ကူသော drive တခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ PSI အိမ်သာသန့်စင်
ပထမဦးဆုံးခြားနားချက်လက်မှတ်များဝယ်ယူအတွက်ဒုတိယခြားနားချက်များ၏ရရှိနိုင်မှု, 1,5 ကြိမ်အထက်စျေးနှုန်း priblzitelno stoimot အခန်းဖြစ်ပါတယ်, တတိယကွာခြားချက်အခန်းအတွင်း၌ zakryvaetsya ပေးသောသီးခြားအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော် LRA လူလိမ်အမြိုးမြိုးမှသင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု negarantiruet ။
Купейный вагон — это коридор и закрытые купе (отсеки)
В плацкарте купе открытые — без глухой стенки, ещ есть боковые места — вдоль прохода.
reserved ထိုင်ခုံအဲဒါကို overpay သာ. ကောင်း၏, ကြောက်မက်ဘွယ်သောရဲ့, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်မသွား။
တကယ်ကွဲပြားခြားနားမရှိပါ။ 🙂သာဒီမှာတံခါးကိုပိတ်ပွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ယာ မည်သည့်ယစ်မူး debiloidov esch နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုထက်ပိုသောအဖြေ Coupe ...
Наталья дала очень доходчивые картинки — добавить нечего.
Пассажировместимость плацкартного вагона в полтора раза больше, чем у купейного — 54 места против 36.
Веских преимуществ купе в сравнении с плацкартом я не вижу — за исключением меньшей нагрузки на туалеты: и в том, и в другом вагоне их по два. По-моему, если попутчик попадется неудачным — в купе он может даже больше отравлять путешествие, чем на виду у всех.
ထိုအခါငါနာမည်ကြီး Bard Anes Zarifyan မှတ်ထားပါ ငါကဒုတိယ-class ကိုရထားသီဆိုခဲ့.
Coupe4လူကိုအပေါ်တစ်ဦးအခန်းပါ! ကားကိုလုံးဝအတူတကွရှိသမျှတို့, ဝေဖန်လျက်နေကြသည်မဟုတ်အခါတစ်ဦးကယူထားတဲ့ထိုင်ခုံ! ဆက်ဆက်ပိုမိုအဆင်ပြေ Coupe!
reserved ထိုင်ခုံတစ်ခုဖွင့်လှစ်အခန်းဖြစ်ပါတယ်တံခါးပိတ်အခန်း reserved ထိုင်ခုံဖြစ်ပါသည်
Posted in, မြေပုံများ, ပို့ဆောင်ရေး, GPS,
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,260 စက္ကန့်ကျော် Generate ။